Wafdi ka koobnaa Wasiirro iyo Xildhibaanno oo maanta booqday Magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka | warsugansomaliya.wordpress.com
warsugansomaliya / November 22, 2013
Wafdiga waxaa garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ku soo dhaweeyay mas’uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan, saraakiisha ciidamada Jabuuti ee howlgalka AMISOM iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada Beledweyne.
Wafdiga ayaa booqday saldhiga booliiska magaalada Beledweyne oo Taladaadii aynu soo dhaafnay weerar isugu jiray Ismiidaamin iyo mid toos ah ay ku qaadeen xoogag ka tirsan Al-shabaab, iyaga oo u kuur-gallay khasaaraha iyo bur-burka ka dhashay qaraxa, waxaana halkaa warbixin ku siiyay saraakiisha ciidamada booliiska maamulka gobolka iyo kuwa Jabuuti ee goob jooga u ahaa weerarkii dhacay lagu qaaday saldhiga.
Intaa kadib xubnaha gollaha wasiirrada ayaa u gudbay isbitaalka guud ee magaalada Beledweyne oo ay jiifaan qaar ka mid ah dadkii rayidka ahaa ee ku dhaawacmay weerarka, iyaga oo mid mid isku dul-taagay dadka dhaawaca qaba, kana wareystay xaaladooda caafimaad dhaqaatiirta isbitaalka.
Markii ay soo dhameysteen booqashada bukuunka kadib ayeey ku wareejiyeen wafdiga agaasimaha guud ee isbitaalka Dr Axmed Max’ed Khaliif deeq dawo ah oo ay bixisay wasaarrada hormarinta adeega bulshada oo loogu talagalay in lagula tacaalo xaalada caafimaad ee bukaanka ku jira isbitaalka…
wariye faysal muuse adam email faysalhassan1@hotmail.com
November 22, 2013 in Home, warka.
Rabshado ka dhashay Nin la dilay oo ka taagan magaalada Jowhar
← Dugsi Casri Ah Oo Adoo Jooga Gurigaaga Aad Ku Baranaysid Qur’aanka Kariimka Ah Iyo Culuumtiisa Oo Laguu Furay
booliska magaalada new york oo shaaciyay in ay baxsadeen raggii ka danbeeyay qaraxii westgate ee nairobi kenya →